“Safarka” waxay leedahay macne kaladuwan | Sansan
Qofkasta, “safarka” waxay leeyihiin macno kaladuwan. Caruurta aan taxadar laheyn, safarka waxay cuni karaan qadada macaan ee hooyadeed ay la fadhiisatay jaceyl, oo ay si farxad leh ula ciyaari karto asxaabta, runtii waa kan ugu farxadda badan. Iyaga, macnaha safarku wuxuu noqon karaa "ciyaar" iyo "cun"! Dhallin-yarada jecel markii ugu horreysay, safarka waxaa loo jiidi karaa labis, dhar gashan kara isla markaana la fariisan kara bas isku dalxiis dadka aad jeceshahay. Iyaga waqtigaas, macnaha safarku waa "labbiska" iyo "jacayl"; Dadka dhallin-yarada ah ee hadda soo galay bulshada oo ay ka buuxaan naf la dagaallama, safarka ayaa badanaa ah wax xiiso leh. Qalbiyadoodu waa xamaasad buuxda, oo ma sugaan inay ogaadaan waxyaalaha cajiibka ah ee ka horreeya. Maxaa kale oo u qalma inay dhadhamiyaan oo wax bartaan. Waqtigaan, macnaha safarku muddo dheer waa laga soocay "ciyaar" iyo "jacayl iyo jacayl"
, Laakiin waxay leedahay macno qoto dheer. Dadka da'da ah ee waayo-aragnimada hodan u ah nolosha, “safarka” ayaa muddo dheer lumiyay sababteeda. Si ka duwan carruurta u safra madadaalo, iyagu ma doonayaan inay dhallinyarradu si indho la’aan ah u daba galaan waxa aan haysan. Kaliya waxay rabaan inay arkaan midkan quruxda badan. Adduunyada, waxaan rabaa inaan waqti badan la qaato qoyskeyga oo aan uga tago xusuus fiican noloshaan gaaban.
Markaad safrayso, waxaad arki doontaa ubax qalaad iyo dhir, shimbiro dhif iyo dugaag ah oo aadan weligaa maqal, ifafaale bulsheed oo aadan weligaa arkin… Waxaad arki doontaa in safarku yahay mid xiiso badan. Waad dareemi kartaa in noloshu aysan sahlaneyn safarka, aad ogaato sida loo qiimeeyo koritaanka dhirta ee dildilaaca, jabka shimbiraha jabay, isbadalka cicada… Muuqaallo yaab badan oo kala duwan, waxyaabo qaar aan laga baran karin buugga. , aad rabto Discover run ahaantii. Si aad u qabato daqiiqaddaas cajiibka ah, u isticmaal indhahaaga si aad u duubto, oo aad u ogaato. Safarku waa nooc ka mid ah nasashada shucuurta. Markaad fiiriso cirka buluugga ah iyo doogga ballaadhan, waxaad dareemi doontaa xasillooni, isla markaana niyaddaadu si miyir la’aan ah ayey u soo fiicnaan doontaa. Adduunku waa ballaadhan yahay, oo keligaa waad ku raaxeysan doontaa. Niyaddaadu ha u duusho, oo hawo hawo nadiif ah ha kugu wareejiso. Waxaad si nabad ah oo macaan ugu seexan kartaa riyo nabdoon. Riyooyinka yaabka leh: caraf udgoonku wuxuu u muuqdaa mid leh macaan.
Muhiimadda safarku waa in aad ka heli karto macnaha dhabta ah ee nolosha, waad kordhin kartaa aqoontaada, waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo xiiso leh, naftaada waad iska iloobi kartaa oo aad nasi kartaa